पर्वतमा रोट्रयाक्ट सप्ताह मनाईने ! – ebaglung.com
पर्वतमा रोट्रयाक्ट सप्ताह मनाईने !
२०७३ फाल्गुन २८, शनिबार २०:५१	अन्य समाचार
विशन क्षेत्री, पर्वत, २०७३ फागुन २८ । अघिल्लो वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रोट्रयाक्ट क्लव अफ पर्वतले रोट्रयाक्ट सप्ताह मनाउने भएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म सप्ताह मनाईने क्लवले जानकारी दिएको छ । मार्च १३ लाई हरेक वर्ष रोट्रयाक्ट दिवसका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाईने गरिन्छ । दिवसको अवसरमा रोट्रयाक्ट क्लव अफ पर्वतले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मनाउने भएको हो । सप्ताहअन्तर्गत प्रत्येक दिन फरकफरक किसिमका कार्यक्रम हुने जनाईएको छ ।
फागुन ३० गते रोट्रयाक्ट सप्ताहको उद्घाटन हुनेछ । उद्घाटनको दिन उद्यमी सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चैत्र १ गते आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कुश्मा नगरपालिका चुवास्थित लालेश्वर गुफामा मूर्ति स्थापना कार्यक्रम रहेको छ । तेश्रो दिन ठुलीपोखरीको एक विद्यालयमा अपाङ्गलाई ह्विलचियर तथा स्टेशनरी सामाग्री वितरण गरिने क्लवका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा आरसीले जानकारी दिए । चौथो दिन भने आयोजक क्लव र पर्वत संगीत तथा ईलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी संघबिच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता रहेको छ ।
पाँचौ दिन ४ गते दुर्लुङ्ककोटको सूर्यप्रकाश माविमा विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक सामाग्री हस्तान्तरण गरिने सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक मिलन पौडेलले जानकारी दिए । युवाहरुलाई व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम छैटौँ दिन रहेको छ । अन्तिम दिन ६ गते जिल्ला प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा ट्राफिक सचेतना बोर्ड स्थापना तथा बजारक्षेत्रमा सरसफाईका बोर्ड स्थापना रहेको छ । र सोही दिन सप्ताहको समापन हुनेछ ।
कार्यक्रमका लागि तीन लाख बराबरको अनुमानित लागत तोकिएको छ । क्लवका पदाधिकारीहरुले खाजा खर्च कटाएर, स्थानीय संघसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी व्यापारीहरुबाट सहयोग मागेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्लवले जनाएको छ । क्लवले प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम भन्दा पनि सहयोगका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि प्रत्येक कार्यक्रमका संयोजक तोकिएको समेत उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमको लागि क्रमशः गणेश पौडेल, मिना खड्का, अर्जुन बहादुर केसी, गोपाल रिजाल, कामना रेग्मी, प्रकाश पौडेल, विशन क्षेत्री र अर्जुनराज पुरी संयोजक रहेका छन् । सन् २०११ मा स्थापित क्लवले स्थापनको छैटौँ÷सातौँ वर्षमा चेतनामूलक कार्यमा उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ । क्लवमा हाल एक सय पाँच भन्दा बढि सक्रिय सदस्य रहेका छन् ।
झिम झिम परेली गीतको छायाकन सुरु !
रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र नसच्याए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी !